I-Condo yaseMantla ye-Olmsted eNtofo Kufuphi nayo yonke into!
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguPamela
Igumbi lokulala eli-2 elinegumbi labucala eline (2) ubungakanani bukakumkanikazi kunye (1) nebhedi egcweleyo. Kufuphi nayo yonke into kuquka nesikhululo seenqwelomoya. Icociwe ngobuchule, ifenitshala entsha kraca enoomatrasi benkumbulo kuzo zonke (3) iibhedi. Idama lokuqubha loluntu (alivulanga ngenxa ye-Covid). Kumgama wokuhamba weWalmart, iThagethi, iZiko lokuThenga eliMntla eliMntla kunye neendawo zokutyela ezininzi. Kwimizuzu nje yendlela ekhululekileyo ngaphandle kweCleveland. Khusela ukufikelela kwisakhiwo kunye namagumbi okuhlambela ayi-1.5.
Ifakwe ngokupheleleyo kuzo zonke izixhobo zasekhitshini, iimbiza, iipani, umenzi wekofu kunye neForeman Grill. Ngaphantsi kwemizuzu eli-15 okanye iHuntington Beach kunye nemizuzu emi-5 ukusuka eCleveland Metro Parks Rocky River Reservation. Iakhawunti yeNetflix enikezelweyo.
Ifakwe kwindawo ethandwa kakhulu enokufikelela ngokukhawuleza ekutyeni, ekuthengeni nakwiipaki zemetro kumgama wokuhamba. Lake Erie Huntington beach 15 mins kude. Ngaphakathi kwemizuzu engama-45 ukuya kunye neyure ukusuka eCedar Point kunye nePut N Bay
Ungeno olukude. Ukusebenzisana kuya kuba yi-VIA ifowuni kunye ne-imeyile. Uqhagamshelwano lwendawo olungxamisekileyo luyafumaneka